Ny sakafo tsara indrindra ahazoana hozatra | Sakafo Nutri
Sakafo hanina hozatra
Michael Serrano | | Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, sakafo
Ny sakafo hahazoana vatan'ny hozatra dia manan-danja toy ny fanatanjahan-tena amin'ny fananganana vatana matanjaka kokoa. Raha ny manatanjaka ny hozatrao no tanjonao, tsy maintsy mihantsy ny vatanao amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana ianao raha manohana azy amin'ny sakafo ara-dalàna.
Discover inona ny otrikaina tsy tokony ho tsy ampy amin'ny sakafonao ary inona ny sakafo tsara indrindra hahazoana tavy, samy niavian'ny biby sy ireo mety ho an'ny vegetarian sy vegan.
1 Sakafo sy hozatra
4 Ny tratran'ny akoho
5 Sakafo mena
7 Yaourt grika
8 Sakafo bebe kokoa izay manampy anao hahazo vatan'ny hozatra
9 Ny hozatra ary ny fihinanana hena
Sakafo sy hozatra
Betsaka ny sakafo ahazoana mitombo ny hozatra. Maro amin'izy ireo no manan-karena proteinina. Ilaina ny proteinina satria manampy ny hozatra hody sy hitombo aorian'ny fiofanana.
Fa ny fiofanana hahazoana hozatra dia tena mitaky asa mafy ho an'ny vatana, ka izay no tsy ampy ny proteinina. Ilaina koa ny karbohidraty sy ny tavy. Ireo dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny sakafon'ny atleta noho ny tsindrona angovo.
Amin'ity lisitra manaraka ity dia hahita sakafo manan-karena amin'ny vitamina sy mineraly koa ianao. Ary io dia, raha te hanao tsara indrindra mandritra ny fampihetseham-batana dia tsy azontsika atao ny miala amin'ny otrikaina. Ny vatan'ny atleta dia mila ny fonosana feno.
Ity trondro ity dia heverina ho tena mandaitra hahazoana tombony hozatra. Ny antony dia anao fihinanana proteinina be, izay manodidina ny 20 grama ny proteinina isaky ny 100 grama an'ity sakafo ity.
Ny olona te-hahazo vatan'ny hozatra, ary koa ny atleta rehetra amin'ny ankapobeny, dia afaka mandray soa betsaka amin'ny asidra matavy omega 3. Salmona dia manana omega 3 avo lenta, tavy fototra ho an'ny hozatra. Ary toy ny hoe tsy ampy izany dia hitantsika ihany koa amin'ity trondro ity ireo vitamina vitsivitsy ao amin'ny vondrona B.
Ho fanampin'ny fandraisana anjara manodidina Proteinina 25 grama isaky ny sakafo 100, ny tuna dia maneho tsindrona vitamina tsara, ao anatin'izany ny vitamina A, vitamina B12, niacin, ary vitamina B6.
Raha ampiantsika izany manan-karena asidra matavy omega 3 (mifandraika amin'ny fahasalaman'ny hozatra) mora ny mahatakatra ny antony mahatonga ity trondro ity malaza be amin'ny bodybuilder.
Ny tratran'ny akoho
Ny tsy fahazoana proteinina ampy dia mety hisakana anao tsy hahatratra ny tanjon'ny hozatra. Miaraka amin'ny bodybuilder, ny tratran'ny akoho dia feno proteinina, mahatratra 31 grama ao anaty 100 grama.
Ity sakafo ity manome koa niacin sy vitamina B6. Ireo otrikaina ireo dia manampy ny vatana hiasa tsara mandritra ny fanatanjahan-tena.
Ny henan'omby dia afaka mampitombo ny habetsahan'ny hozatra azo amin'ny alàlan'ny fampiofanana mahery. Ny antony dia satria feno proteinina, miampy vitamina B, mineraly ary créine.
Ny fitazonana ny kaloria hohaninao ho tsara dia tsara na dia manandrana mahazo hozatra aza ianao. Izany no antony tsara ny misafidy hena mahia mahia ambany tavy.
Miseho eo amin'ny lisitry ny sakafo ankafizinao hatrany ny atody hahazoana volo hozatra. Ary tsy mahagaga izany, satria ny proteinina omeny dia tena mahasoa ny hozatra. Ity sakafo ity misy leucine, asidra amine izay manampy amin'ny famelomana vatana.
Tombony iray hafa amin'ny fihinanana atody mifandraika amin'ny fitomboan'ny hozatra dia ny fandraisana anjara amin'ny choline, izay mampihemotra ny fiandohan'ny havizanana mandritra ny fanatanjahan-tena. Tsy tokony hodinihintsika koa ireo vitamina B mahery.
ronono manambatra proteinina assimilation haingana sy miadana. Ny fikarohana sasany dia manondro fa io zava-misy io dia mampiroborobo ny fitombon'ny otrikaina.
Ny yaourt grika dia tsara indrindra amin'io lafiny io. Ary ny fanomanana azy io dia mahatonga ny fihinanana proteinina ho lehibe kokoa noho ny an'ny yaourt mahazatra. Manam-pahaizana maro no manoro hevitra ny fihinanana yaorta grika aorian'ny fiofanana hananganana hozatra.
Sakafo bebe kokoa izay manampy anao hahazo vatan'ny hozatra
Ireto misy ireto sakafo hafa izay tokony hoeritreretinao ho tafiditra ao anaty sakafo raha te-hahazo hozatra ianao:
Ny hozatra ary ny fihinanana hena
Raha mpihinan-kena na vegan ianao ary mila mihombo ny hozatra dia diniho ny sakafo tsy biby miaraka amin'ny proteinina avo lenta, toy ny voanjo, soja, tofu, tsaramaso, na akorandriaka. Voanjo no laharam-pahamehana voalohany miaraka amin'ny proteinina 34 grama isaky ny kapoaka, arahin'ny soja (28) sy tofu (20) akaiky. Ny tsaramaso sy ny sipa dia manome 15 sy 12 grama avy.
Ny Quinoa dia tsy be proteinina toy ny sakafo telo teo aloha (manodidina ny 8 grama isaky ny kapoaka), fa matetika dia anisan'ny sakafo tsara indrindra hahazoana tombony hozatra. Izany dia satria quinoa dia manome fatra gliosida tsara, tena ilaina tokoa mba hahazoana ny angovo ilaina hijanonana ho mavitrika, ary koa maneziôma, mineraly ilaina amin'ny fiasan'ny hozatra sy hozatra.
Toy izany koa ny vary volontany. Ny vary volontsôkôlà dia tsy misy afa-tsy proteinina 5 grama isaky ny kapoaka, fa ireo dia ampiarahana amin'ny gliosida mahasalama Manampy anao hanao fanatanjahan-tena mafy sy lava kokoa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Sakafo hanina hozatra
Soa azo avy amin'ny sôkôla